Xinhua Myanmar - နမီးဘီးယားနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် လက်ခံရရှိ
နမီးဘီးယားနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် လက်ခံရရှိ
နမီးဘီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီး Netumbo Nandi-Ndaitwah (ယာ) နှင့် နမီးဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ် Zhang Yiming တို့အား တွေ့ရစဉ် (ဆငဟွာ) Africa & Middle East
ဝင်းလ်ဟိုခ်၊ မတ် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နမီးဘီးယားနိုင်ငံ၏ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကမ်ပိန်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် သည် မတ် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာခြင်းက နိုင်ငံအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းကြောင်း နမီးဘီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဝန်ကြီး Netumbo Nandi-Ndaitwah က Hosea Kutako နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် ကာကွယ်ဆေးများ လက်ခံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
နမီးဘီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် ဝင်းလ်ဟိုခ်ရှိ Hosea Kutako နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော ကာကွယ်ဆေးသေတ္တာတစ်လုံးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နမီးဘီးယားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား ကာလရှည် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြလျက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးများသည် နမီးယားနိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါ စီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်နှင့် စီးပွားရေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများကို နမီးဘီးယားနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာတွင် ကူညီခဲ့သော ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ကာကွယ်ဆေးများ လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းအခမ်းအနား၌ နမီးဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ် Zhang Yiming က ၎င်းကာကွယ်ဆေးများသည် နမီးဘီးယား ပြည်သူများအတွက် လက်ဆောင်သာမက နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအတွက်လည်း ထင်ရှားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နမီးဘီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် ဝင်းလ်ဟိုခ်ရှိ Hosea Kutako နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော ကာကွယ်ဆေး သေတ္တာများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နမီးဘီးယားနိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း တိုးချဲ့အစီအစဉ်အရ ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အဆင့် ၁ အား ဒေသနှစ်ခုတွင် မတ် ၁၉ ရက်မှ ဧပြီ ၁၆ ရက်အထိ စတင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Kalumbi Shangula က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
WINDHOEK, March 17 (Xinhua) -- The first batch of COVID-19 vaccines from Chinese pharmaceutical firm Sinovac arrived in Namibia on Tuesday afternoon, which will help the African country's immunization campaign against the pandemic.
Receiving the vaccines at the Hosea Kutako International Airport, Namibian Deputy Prime Minister and Minister of International Relations and Cooperation Netumbo Nandi-Ndaitwah said the vaccines' arrival gives hope to the country's fight against the coronavirus.
Highlighting the long-time friendship between Namibia and China, Nandi-Ndaitwah said she hopes China's vaccines will help the country better manage the pandemic and revive the economy.
She also thanked Zimbabwe for its assistance in transfering the vaccines to Namibia.
Speaking at the handover ceremony, Chinese ambassador to Namibia Zhang Yiming said the batch of vaccines is not onlyagift to the Namibian people, but alsoavivid reflection of the two countries' political trust and friendship.
The country will roll out vaccines in line with the Expanded Program on Immunization, and phase I vaccination will begin from March 19 to April 16 in two regions, according to Health Minister Kalumbi Shangula. Enditem
1`- Namibian Deputy Prime Minister and Minister of International Relations and Cooperation Netumbo Nandi-Ndaitwah (R) and Chinese Ambassador to Namibia Zhang Yiming pose for photos with COVID-19 vaccines from China at the Hosea Kutako International Airport in Namibia's capital Windhoek on March 16, 2021. (Photo by Musa C Kaseke/Xinhua)
2- 3-A box containing China-donated vaccines is loaded ontoatruck at the Hosea Kutako International Airport in Namibia's capital Windhoek on March 16, 2021. (Photo by Musa C Kaseke/Xinhua)
4- Boxes containing China-donated vaccines are loaded ontoatruck at the Hosea Kutako International Airport in Namibia's capital Windhoek on March 16, 2021. (Photo by Musa C Kaseke/Xinhua)